ခရီးသွားပို့ စ်လေးတွေရေးချင်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ လက်တွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ခရီးသွားပို့ စ်လေးတွေရေးချင်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ လက်တွေ	12
ခရီးသွားပို့ စ်လေးတွေရေးချင်နေတဲ့ ကျွန်မရဲ့ လက်တွေ
Posted by သျှားသက်မာန် on Sep 15, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.., Think Different, Travel | 12 comments
ခုတစ်လော..ကျွန်မစာပြန်ရေးချင်နေပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အသေးစားအွန်လိုင်းရှော့ ရယ်…သူများလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့.Travels & Tours ရယ်နဲ့ စာပြန်ရေးချင်စိတ်ရှိနေပေမယ့်မအားဘူးဖြစ်နေပါတယ်…ဒီကြားထဲဧည့်သည်တွေအတွက်တိုးတွေစီစဉ်ပေးရင်း…ခရီးသွား
ချင်စိတ်လေးတွေလည်းဖြစ်လို့ ..ခ၇ီးကထွက်ရတာနဲ့ ရေးဖို့ စခန်းကိုမရောက်ခဲ့ပါဘူး….
ခုOutbound Sales Executive တာဝန်ကိုယူထားရတော့..ကိုယ်ကဧည့်သည်မမေးခင်အကုန်သိထားဖို့ ရန်လိုတော့ကာ…သူများခရီးသွားထားတဲ့ ပို့ စ်လေးတွေလိုက်ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်…. အားလည်းအားကျမိပါတယ.်.. သူတို့ တွေဆို..ခရီးသွား…စာလည်းရေးနိုင်ကြပါတယ်….. သူတို့ စာလေးတွေဖတ်ရင်း…. အရင်ကမိုးကုတ်ကိုခရီးသွားရင်းရေးထားတဲ့ပို့ စ်လေးလည်းရေးဖူးတော့… စာပြန်ရေးချင်တဲ့ပိုးတွေပြန်ထလို့လာပါရော….. သူများတွေလိုနေရာများများစားစားမရောက်ဖူးသေးပါဘူး… ဒါပေမဲ့သွားခဲ့ဖူးတဲ့နေရာလေးတွေကခုခေတ်စားလာတော့..
ကိုယ့်ရဲ့ အတွေ့ အကြုံဖီလင်လေးကိုလည်းတင်ပြချင်လို့ပြန်ရေးတော့မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်ပါတယ်….. အားပေးကြပါဦးနော်…
လာမယ့်စနေ 17ရက်နေ့ မှာလည်းခရီးသွားဖို့ ရှိပါသေးတယ်…အဲ့ခရီးလေးကိုစရေးပါမယ်နော်…
Foolish Girl says: စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်
A mar nyo says: စောင့်နေပါမယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: အားပေးနေပါ့မယ်။
သျှားသက်မာန် says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…………
kai says: ခရီးသွားရတာကြိုက်သမို့.. ခရီးသွားရင်း ခရီးသွားဆောင်းပါးရေးချင်တာ…
အခုက.. ဒေါ်လာ ၄ထောင်နဲ့ဖြစ်နေပြီလည်းသိရတယ်..။
ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့်မလားလို့.. ။ ခရီးသည်တွေနဲ့. ကပ်လိုက်လို့ရတာပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 331
သျှားသက်မာန် says: ကိုယ်ကတိုးလီဒါမျိုးလုပ်ရင်တော့ကပ်လိုက်လို့ရပါတယ်15 ယောက်ဆို 1ယောက်ဖရီးရတယ်လေ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ခရီးသွားဆောင်းပါးကတော့ရေးသင့်ပါတယ်
သျှားသက်မာန် says: မှန်လိုက်လေ…ကိုပေါက်ရေ
Thint Aye Yeik says: .ရေးသားရေး ဖတ်ဖို့က အနော်တို့တာဝန်
သျှားသက်မာန် says: အိုကေကျေးဇူးပါ
Ma Ei says: ခရီးသွားပို့ စ်တွေမှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေလဲထည့်ပေးနော်
ကိုယ်တိုင် မရောက်ဖူးတဲ့နေရာလေးတွေဆို သွာချင်လာအောင် အလှပလေးတွေမြင်ရအောင်လို့ပါ….
သျှားသက်မာန် says: ဓါတ်ပုံထည့်ထားပါတယ်..ငွေ ၁၇၀၀၀ကျပ်တည်းနဲ့ မဲလံတောင်ကိုသွားမယ်ပို့ စ်လေးပါ..